Do & Don’t – Rules for Writers – Must Read! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » Do & Don’t – Rules for Writers – Must Read!
Do & Don’t – Rules for Writers – Must Read!
Posted by kai on Sep 24, 2010 in Editor's Notes | 294 comments
Do & Don't Mandalay Space
မတူသောအတွေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်စာ ချရေးပါ
တိုင်စာတင်လို့ရဖို့ ( Report this post (သတင်းပို့ရန်အတွက်သာ))ထည့်ပြီးနောက်မှာ တိုင်စာတွေ အလွန်များပြားစွာရပါတယ်။ Direct email တွေလည်း အများကြီးရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာတွေ့ရတာပါ။
၁) – စာခိုးခံရသူတွေအတွက် ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဖက်က ဖြေရှင်းစာ ရေးပါမယ်။
Mandalay Gazette Website ကို Forum လိုသဘောထားမြင်ကြည့်ပါ။ Member ဖြစ်ပြီးရင် စာတင်ချင်တဲ့သူက စာတွေတင်ချင်သလိုတင်နိုင်တာပါ။ အဲဒီတင်တဲ့စာကို တင်သူကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူနိုင်ရမှာပေါ့။ Admin, Editorsတို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သူများစာတွေမှန်းသိနိုင်မှာလည်း။ တက်လာတဲ့စာကို Editorက ဘယ်လိုလုပ်တာဝန်ယူနိုင်မှာလည်း၊ ယူအက်စ်မှာ ညအချိန်က မြန်မာပြည်မှာနေ့အချိန်မို့နာရီနဲ့မလပ်လည်း ကြည့်မနေနိုင်ပါ။ အယ်ဒီတာအဖွဲ ့ကလူတိုင်း နေ့လည်မှာ ပုံမှန်ရုံးအလုပ်သွားပါတယ်။ MG Website အတွက်အချိန်ပြည့်ဘယ်သူမှ အလုပ်လုပ်မနေပါ။
ဒါပေမဲ့တိုင်စာတချို ့မှာ စာတွေခိုးချနေတာ သတင်းစာက တာဝန်မယူနိုင်တာမို့ခိုးချမီဒီယာ၊ သူခိုးအားပေးမီဒီယာ၊ ကော်ပီပေ့စ်မီဒီယာ အစုံပြောကြပါတယ်။ အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာပါ။ ငွေကြေးအရလည်း အလုံးစုံအကုန်အကျခံရတယ်။ ဆဲဆို ပြောကြတာလည်းခံရတယ်။
ဆိုတော့ ..တကယ်လည်း သူများစာတွေကူးတင်ကြတာ အလွန်များပါတယ်။ အဲင်္ဒီအတွက်လောလောဆယ်တော့ တောင်းပန်ရမှာပါပဲ။ တကယ်ကို တောင်းပန်ပါတယ်။
တင်တဲ့စာတွေမှာ ခိုးချ၊ ကော်ပီကူးတာတွေများတော့ ဘယ်အယ်ဒီတာမှလည်း ထိုင်မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ တရက်တရက်တက်လာတဲ့စာတိုင်းလည်း နာရီနဲ့ချီပြီးမစစ်ဆေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဖိုရမ်သဘောနဲ့မြင်ကြစေချင်တာပါ။ မင်န်ဘာတိုင်း ကိုယ့်စာကိုယ်.. ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူကြစေချင်တာပါ။ တခြားဖိုရမ်တွေနဲ့မတူတာက ဒီမှာ တရက်တရက် Log in ဝင်လာရင်လည်း ငေ၊ွပေးတယ်. ကော်မန့်ရေးချင်တာရေး ငွေပေးတယ်. စာတင်ချင်တာတင် ငွေပေးတယ်။ ငွေပေးတာနည်းပေမဲ့ လူအရေအတွက်များတာမို့ငွေပမာဏ မနည်းလောက်ဘူးလို့ နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအခွင့်အလမ်းကို တလွဲသုံးကြတာမို့ပွိုင့်ပေးစံနစ် အားလုံးပြန်စဉ်းစားရပါတော့မယ်။
မြန်မာပြည်မှာ မဂ္ဂဇင်း၊ဂျာနယ်တွေဆီ သတင်းစာမူပို့ရင် မည်သူမဆိုဟာ ပို ့ချင်တာပို့လို့ရပါတယ်။ တိုက်ကိုရောက်ပြီးမှ အယ်ဒီတာက စာတွေဖွင့်ဖေါက်ပြီး တခုချင်းဖတ် .. ကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်တဲ့စာမူမှာ စာမူပို ့သူက တာဝန်ယူဝန်ခံထားရတာတွေပါပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်ရတယ်။ တခြားတိုက်ကိုပို ့မထားဖူး ဘာသာပြန်ဆို မူရင်းကို ညွှန်းရတယ်။ စတာတွေက သတင်းသမား၊ စာရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာဖြစ်လိုသူတိုင်းလိုက်နာရမဲ့ ပြောပြစရာမလိုတဲ့ စည်းကမ်းတွေပါ။ အဲဒီပို ့လာတဲ့စာတွေကို ဒါတွေက သူတပါးစာမူတွေလို့ အယ်ဒီတာက ဘယ်လိုလုပ်စစ်နိုင်မှာလည်း၊ သိနိုင်မှာလည်း..။
သဘောတူတူပဲ… ဒီဝက်ဆိုက်မှာ တင်ချင်တာလာတင်.. အယ်ဒီတာက ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလည်း ..။စစ်နိုင်မှာလည်း..။
ဒါပေမဲ့ အခုလိုကူးယူတဲ့စာတွေအတွက် တောင်းပန်ရမှာပါပဲ။ မူရင်းစာမူ ပိုင်ရှင်တွေအားလုံးကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။နောင်မဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။ လုပ်သင့်တဲ့ အကြံဉာဏ်ကောင်းရှိရင်လည်း ပေးကြပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
၂) စာတင်နေသူများ ခင်ဗျား။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ စာရေး။ သတင်းရေးတတ်အောင်အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပါ။ အဲဒီကနေ တဆင့်တက်လို့ ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာ ထိုက်တန်တဲ့ငွေကြေးရပြီး ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခံရဖို့အခွင့်အလမ်းလဲရှိနေပါတယ်။ ယူအက်စ်မှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ တခုတည်းသော မြန်မာသတင်းစာမှာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဖေါ်ပြခံရမှာပါ။ အဲဒါကို သတိထားကြစေလိုပါတယ်။ အဓိပါယ်မဲ့စာတွေ ဟိုကကူး၊ ဒီကကူးမလုပ်စေချင်ပါဘူး ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ ပထမ စာမျက်နှာဟာ အင်မတန်အဖိုးတန်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာမှန်းမသိ။ ညာမှန်းမသိ စာတက်လာပြီးရော၊ ငွေရပြီးရော သူများစာတွေ ခိုးယူမတင်စေလိုပါဘူး။ ကိုယ့်စာကိုယ်ရေးတယ်ဆိုပြီးလည်း စာတပိုဒ်ရေးလိုက် ပိုစ့်တခုတင်လိုက် မလုပ်ကြစေချင်ပါဘူး။ အဲဒီတင်တဲ့စာကနေ ကိုယ်က ငွေကြေးတန်းဖိုးတခုရယူတယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်အားကိုလည်း တန်ဖိုးရှိအောင် ပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ သေသေချာချာ လုပ်ပါ။ တာဝန်ယူပါ။
သူများပင်ပန်းစွာ တန်ဖိုးထားရေးထားတဲ့စာကို ကူးယူပြီး ပြီးပြီးရောတင်တာဟာ အင်မတန်ကိုရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ မူရင်းစာရေးသူဆီက ခိုးယူတာနဲ့တူတူပါပဲ။ ငွေတမျိုုးထဲမဟုတ်ပါဘူး၊ ဂုဏ်သိက္ခာရော ခိုးယူတာပါ။ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီစာမျိုးကို ကောင်းလှပါတယ်ဆိုပြီး သတင်းစာမှာ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြလိုက်မယ်။ အဲဒီကမှ ယူအက်စ်က အသင်းအဖွဲ ့တက္ကသိုလ်တခုခုက ဖတ်မိပြီး ဆုပေးမယ်။ ယူအက်စ်ကို စာမူရှင်ကို ခေါ်ယူပြီး ကျောင်းဆက်တက်စေမယ်ဆို်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလည်း.။
အဲဒါကြောင့်နစ်နာရတဲ့ မူရင်းစာရေးသူကို ဘယ်လို လျှော်စားပေးမလဲ…။
(တခါမကဖြစ်ပြီးသွားပါပြီ။ ဒီက စာတပုဒ်ကို ကောင်းလှပါချည်ရဲ့ဆိုပြီး တင်တဲ့သူကို ခရက်ဒစ်ပေးလို့ အီးမေးလ်နဲ့လက်ဆင့်ကမ်းကြရင်း နောက်ဆုံးမူရင်းပိုင်ရှင်က ထွက်လာတော့ အားလုံးအရှက်ရပါတယ်။ မီဒီယာလည်း အင်မတန် သိက္ခာကျပါတယ်။)
သတင်းဆိုရင်လည်း မန္တလေးဂေဇက်ဟာ အေပီ။ အေအက်ဖ်ပီ။ ရိုက်တာ အကုန်လုံးနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းကို လက်လွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။
မန္တလေးဂေဇက်ရဲ့ သတင်းစာကို ယူအက်စ်စာကြည့်တိုက်တွေမှာ မော်ကွန်းထား သိမ်းထားတယ်။ အမေရိကန်သံရုံးကဖတ်တယ်။ လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်မှာထားတယ်။ ဒါတွေသိပါသလား..။
ဒီနေ့ အောက်တိုဘာ တရက်ကစပြီး ပုံစံနည်းနည်းပြောင်းပါမယ်။
သတင်းကိုသာ အဓ်ိကထားတင်ပါ။ အင်္ဂလိပ်သတင်းကို ဘာသာပြန်ရေးနိုင်ပါတယ်။ မူရင်း အင်္ဂလိပ်စာတွေကို ပို့စ်မှာ အရင်ဆုံး စာတဝက်လောက်အထိ ကူးတင်ပြပါ။ အပြည့်ဖတ်ချင်သူတွေဖတ်နိုင်အောင် နောက်မှ Website Link ကို ပြပါ။ခေါင်းစဉ်ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်စာအတိုင်းဖေါ်ပြပါ။ သတင်းတူ တွေ၂ခုလောက်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ပြီးမှ ဘာသာပြန်ပါ။အောက်မှာ Comment နဲ့ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြပါ။ သတင်းတိုင်းဟာ ဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်လည်း အကျိုးရှိ၊ သူများအတွက်လည်း တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
event တွေ။ ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အလှူခံတာတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေကိ်ု ဖလိုင်ယာ၊လက်ကမ်းစာစောင်တွေကနေ ကူးတင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ရေးမဟုတ်ရင်၊ မတိကျတဲ့ သတင်းတွေဆိုရင် သက်ဆိုင်သူကို ခရက်ဒစ်တိတိကျကျပေးပြီး (Website URL ရှိရင် Link နဲ့တကွ)Category မှာ တင်တဲ့စာနဲ့ဆိုင်တဲ့ Category ရယ်။ Copy/Paste Category ကိုပါရွေးပြီးမှ စာတင်စေလိုပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အယ်ဒီတာက အချိန်ရှိရင်ရှိသလို စိစစ်ပြီး ပွိုင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
( တချို ့မန်ဘာတွေက သာမန်မန်ဘာမဟုတ်ပဲ Author အဖြစ်အဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်။ ပုံမှန် မန်ဘာက Subscriber ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသူတွေအတွက် အခုစည်းကမ်းတွေက မသက်ဆိုင်ပါ)
မိမိစာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးCategory (တခု)ကိုရွေးချယ်၍ပို့စ်တင်ပါ။Tagထည့်ပါ။Tagကို စာတလုံးစီကော်မာခံပြီးမှထည့်ပါ
Titleကိုတိုတိုရေးပါ။ စာမူရေးသားရာတွင် စာလုံးများကို Spaceခြားပါ။
မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို သတိထားစစ်ဆေးပါ။
ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာ၊Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ ကူးတင်ခွင့်မရှိ။
လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော စာများမတင်ရ။
ဘာသာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောစာများအား ပွိုင့်မပေးပါ။
ကိုယ်တိုင်ရေးစာ မဟုတ်သည်များကို ပွိုင့်မပေးပါ။
မည်သူ့ကိုမှ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မှ ရိုင်းစိုင်းစွာဆဲဆိုခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရ။
ပိုစ့်တိုင်းတွင် (မှတ်ချက်ရေးပြီးသတင်းပို့ပါ) ဟု တောင်းဆိုထားသည်။
အထက်ပါအချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်ယူဆပါက သတင်းပို့စေလိုသည်။
အယ်ဒီတာများမှ တိုင်ကြားစာများကြည့်ကာ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း….။
တလအတွင်း (စာမူရှင်မဟုတ်သူများမှ )အဓိပ္ပ ါယ်ရှိသောကော်မန့်(Comment) ၁၀ခုနှင့်အထက်ရေးသားခံရသော စာမူကို ပွိုင့်(၁၀၀)ထပ်ဆောင်းပေးမည်။
တလအတွင်း ဖတ်သည့်အကြိမ် (View)၁၀၀၀ နှင့်အထက်ရှိသော စာမူကို ပွိုင့်(၁၀၀)ထပ်ဆောင်းပေးမည်။
– ဖော်ဝပ်မေးတွေဆိုပြီးလည်း သူများစာတွေကို ကူးမတင်ကြစေလိုပါဘူး။ အဲဒါတွေကို စာဖတ်သူတော်တော်များများကလည်း ဖတ်ပြီးသားဖြစ်လို့ပါ။
Mandalay Gazette ကို ဘာသာပြန်ရင်…ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ ဖြစ်တာမို့သတင်းတွေတော့တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းက သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တွေမှာပါတဲ့ ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေပေါ့။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တည်ထောင်တာရဲ့ရည်ရွက်ချက်တခုဟာ ပြည်တွင်း-ပြည်ပ မြန်မာပေါင်းကူးဖြစ်ချင်တာမို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမိမြေမှာ နေ့စဉ်ဖြစ်နေပျက်နေတာတွေ၊ ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို ပြည်ပရောက်သန်းနဲ့ချီနေတဲ့မြန်မာတွေ မသိပါဘူး။မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ပြည်တွင်းကသတင်းတွေ ကိုယ်တိုင်စာရိုက်ပြီး၊ခရက်ဒစ်ပေးပြီး တင်နိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေတင်ထားတဲ့ ဝက်ဆိုက်တွေကတော့ တိုက်ရိုက်မကူးချစေလိုပါ။ အဲဒီမှာ သွားဖတ်လည်း ရတာမို ့ပါ။ အဲဒီနောက်မှာမှ ကောမန့်နဲ့ အကောင်းအကျိုးဆွေးနွေးနိုင်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်..။ ကိုယ့်စာမူ၊ သတင်းအတွက် တခြားသတင်းတွေကို ခရက်ဒစ်ပေးပြီး ကိုးကားတာမျိုးတော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်သတင်းရေးနိုင်ရင်တော့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်း ရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူအတွက် ဥပမာပြောရရင်…ဒီနေ့စကော့ဈေး(ဗိုလ်ချုပ်ဈေး)ရဲ့ ဈေးရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ နေ့စဉ်ဓါတ်ပုံတပုံ သတင်းတခုဟာမထူးခြားဟန်ရှိပေမဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအတွက်တော့ အမိမြေအလွမ်းလည်းပြေ။ ပြန်လည်းအမှတ်ရစေတာပေါ့နော၊ သတင်းရေးတာမှာ ဘာကြိုတင်သတ်မှတ်စည်းကမ်းမှ လိုက်နာဖို့မလိုပါဘူး။ ကိုယ်သိသလို သူများသိစေရန်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပြီး ရေးနိုင်ရင်ဖြစ်ပါပြီ။ သတင်းကမသေချာရင် မသေချာဘူးတော့ရေးပေးပါ။ ကိုယ့်အယူအဆထည့်ရင် ကိုယ့်အယူအဆလို့ရေးပါ။ ဓါတ်ပုံတပုံဟာ စကားအများကြီးပြောတာမို ့ဓါတ်ပုံတပုံတင်လည်း သတင်းဖြစ်တာပါပဲ။
– စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတော့ မှားကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်သလောက် အလေ့အကျင့်လေးလုပ်ပြင်စေချင်တာပါ။ ပွိုင့်မလျှော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မှားတာတွေ့ရင် အောက်မှာ အမှန်သိသူက ကောမန့်နဲ့ပြင်ပေးစေလိုပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မြန်မာစာမမေ့မလျှော့အောင် သတ်ပုံမမှားအောင် လုပ်ကြတာပေါ့နော။
– Tagကို ကော်မာခံတယ်ဆိုတာ..ဥပမာ၊ “လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော” ဆိုတဲ့စာကို Tag လုပ်မယ်ဆိုပါတော့။ လူမျိုးရေး, ဘာသာရေး, အသားအရောင်, ခွဲခြားမုန်းတီးမှု လို့လုပ်စေလိုတာပါ။Tagဟာ Search Engineတွေနဲ့တွဲပြီးလည်း အလုပ်လုပ်တာမို့နောက်နောင် နှစ်တွေကြာလည်း ရှာလွယ်ပါတယ်။
– စာမူတွေကိုပွိုင့်ပေးတာဟာ နည်းကောင်းနည်းပါလိမ့်မယ်။ မန ္တလေးဂေဇက်မှာ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက် လစဉ်ဖယ်ထားတဲ့ငွေရှိပါတယ်။ အဲဒီဘောင်ထဲကနေ (အလျှင်းသင့်သလို)ကောင်းတဲ့စာမူတွေအတွက် ပွိုင့်တိုးပေးသွားမှာပါ။ အယ်ဒီတာအဖွဲ ့ရွေးချယ်စာမူ၊သတင်း ဆိုပါတော့။
– Site Admin >Dashboard မှာ Category ရွေးဖို့ နကိုအတိုင်းရှိပါတယ်။ တခြားသူတွေရော ဒီလိုဖြစ်သလား ရေးကြပါဦး။
– နံပါတ်လေး အချက်ဘာကြောင့်တားသလည်း တနေရာမှာ ရှင်းပြဖူးပါတယ်။ ထပ်ရေးရရင် သူတို့ အပင်ပန်းခံလိုက်ထားတဲ့သတင်းကနေ စာကူးတင်သူမန်ဘာက ပွိုင့်ယူရင် မတရားတာကတချက်။ ပြည်ပရောက်မြန်မာ မီဒီယာအချင်းချင်း မူပိုင်ခွင့်ကိစ်စတွေ စကားမပြောချင်တာက တချက်ပါ။ (အရင်က အဲဒီလိုကူးတင်တဲ့ပို ့စ်တွေအတွက် သူတို့က ကန့်ကွက်စာပို့ ကန့်ကွက်ဖူးပါတယ်။)
Kai has written 1055 post in this Website..
သူများတွေပို့စ်တင်လို့ရယ် အီးတုံးတင်လို့မရပါလား ….။ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာတုန်း …။
အယ်ရာတက်ပြီး .. မရဖူးထင်လို့..ကြည့်မိရင်.. ပို့စ်ကရောက်နေရော..
ဆာဗာနတ်က .. ငွေလိုချင်လို့လှည့်စားနေတယ်ထင်တယ်..။
မသိလို့ ဒါလေးနည်းနည်းလောက် မေးပါရစေသဂျီးရေ…. ၂ရက်လောက် ပြန်ရေးသင့် မရေးသင့် စဉ်းစားနေတာ။
kai said: On January 11, 2011
ဒီရက်ပိုင်းမှာ Amazon EC2 ဆာဗာကိုပြောင်းကြည်ပါ့မယ်..။
ပို့စ်က ဘယ်လိုဖြစ်သလည်းတော့ မသိ… တချို ့တင်လို့ရ..တချို ့မရဖြစ်နေတာပဲ..။
တင်လို့ရချိန်မှာ အတင်းတင်တော့ အဲလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်ထင်တာပါပဲ..။
အဲဒါ မနောဖြူကိုလည်း နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်..။
တရက် ..တပုဒ်လောက်..လွန်ရော..၂ပုဒ်လောက်တင်ပါလို့ပါ..။ မတူသောအတွေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်စာ ချရေးစေလိုပါတယ်..။
သဂျီးရဲ့ဒီကော့မန့်ကို ဖတ်တော့ သိပ်နားမလည်ဘူး။ ပိုစ့်ကို တစ်နေ့ တစ်ခု ၂ခုလောက်တင်ဆို မနောဘက် အခြေအနေကိုမတင်ပြတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒေတာဘေ့အယ်တာကြောင့် ဆိုက်က ပိုစ့်တင်လို့မရတာလား……. မနော တင်နေလို့ မန်ဘာများ ပိုစ့်တင်လို့မရတာလားဆိုတာ နည်းနည်းလေး နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေသလို ကိုယ်ပိုင်မူချရေးပါဆိုတာလည်း မနောက ဘာ ကော်ပီတွေများနေလို့လဲလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်သုံးသပ်မိတယ်။ ၈ဝ အရမ်းလိုချင်နေလို့များ နက်ဖိုး ၄၀ဝ ၅၀ဝ အကုန်ခံပြီးလုပ်နေသလား။ သူများကို သိတာလေး ဝေမျှနေတာလားလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်သုံးသပ်နေပါတယ်။ မနောကြောင့် ဒီပြင်သူတွေ တင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ စာသားကြောင့်ဆိုရင်တော့ မနော ဆက်လက်မရေးသားတော့ပါဘူး။ ကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေ ငွေတွေ အချိန်မရပဲ သံယောဇဉ်ကြောင့်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေ ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်။
အခုလိုတင်နေတဲ့ပုံစံက .. ဆာဗာကဒေတာဗေ့စ် ရီဆို့စ်အပြည့်နီးပါးယူသုံးတာပါ..။အဲဒါကို တောက်လျှောက် ၃-၄ခုဆက်တင်ပြီးရင်.. ရီထရိမလုပ်မချင်း… တခြားသူတွေအတွက် .. ၁-၂နာရီလောက်ဘာမှလုပ်မရပါဘူး.။
ဒီတော့ .. ဆိုက်မျက်နှာစာဟာ ..မနောပို့စ်တွေနဲ့ချည်းရပ်နေခဲ့တာ တွေ့ရမှာပေါ့..။
အဲဒီလိုဆိုတော့ ..ပိုစ့်တင်ရင်..အင်တာနယ်ဆာဗာအယ်ရာတက်နေတာက ..သပ်သပ်ဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒါက .. မြန်မာစာလုံး(ဇော်ဂျီ)နဲ့ php,php-cgi ပြသနာပါပဲ..။
မန္တလေးဂေဇက်ဟာ ..မြန်မာကွန်မြူနတီကို အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်ပဲ.. ထောက်ပံ့အားပေးနေတာသာဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒီအတိုင်း ရွာသားတွေလည်း ..သဘောထားကြတယ်လို့ .. ထင်ပါတယ်..။
ချိတ်ချိုးပါနဲ့ ဂျီးတော်ဖြူရယ်။ သဂျီးက ဘီယာတိုက်မွေးထားတဲ့ ကိုဘေးအမဲသားစတိတ်စားပြီး ရီတီတီလေးဖြစ်တုန်း ကီးဘုတ်နှိပ်လိုက်မိလို့ပါ။ သဂျီးမင်းကလည်း နောင်အပြောအဆို (အပြောအဆိုထက် အစားအသောက်ကို) ဆင်ခြင်ပါ။ စာဆိုရှိတယ်လေ..
သူကြီးရေ…. Group က ပိုစ်တွေ ပျောက်နေတယ်နော် …။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။….။ တော်ကြာ သူများတွေက ကျွန်တော် ဖျက်ထားတယ်ထင်နေဦးမယ်…။
ဟုတ်တယ်ဗျ … Group က ပို့စ်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲ မသိဘူး …. အမြဲစိမ်းတွေများ ဝင်ဖျက်သွားတာလား …
ပို့စ်တင်တာ အယ်ယာတက်တော့ tab တစ်ခုနဲ့ homepage ကိုသွားတော့လည်း ကိုယ့်ပို့စ်က ပေါ်မှမပေါ်သေးတာ.. ဒီတော့ reload … reload… reload ဆယ်ကြိမ်လုံးလည်း အယ်ယာပဲပေါ်တယ်… မရတဲ့အဆုံး သိတယ်မို့လား သူကြီးကိုပဲ အပူကပ်ရတာပေါ့
သဂျီးဗျိူ့သဂျီး ကျနော်လဲ ဟိုဟာဖြစ်တယ် ဒီဟာဖြစ်တယ်
ချာချာ ရေ… ဟိုဟာ ဖြစ် ဒီဟာ ဖြစ်ရင် လမ်းထိပ်မှာ ဆေးခန်း ရှိတယ် ကျန်းမာရေး သွားစစ်လိုက်ပါလား။ ကျန်းမာ သန်စွမ်းရင် ဟိုဟာ ဖြစ် ဒီဟာ ဖြစ် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ အားလုံး ကောင်းသွားမယ်။ ကျန်းမာရေး စရိတ်လိုချင်ရင်တော့ ဖောင်တင်ပေါ့။ တင်ထားတဲ့ ဖောင်တွေ များနေရင် ဖောင်ပြင် ပြီး ပြန်တင်ပေါ့။
ချာတူးလန် ဖောင်ပြင်မှ သဂျီးက ပေးမယ်တဲ့နော်.. ကြားဖတ် သတင်းတခုကနေ ကြားမိတယ်။
ဒါပေါ့ဗျာ အများနဲ ့တစ်ယောက် ကျုပ်လွန်တာပေါ့။
အဲဗျာ .. ကိုယ့်လူအလွန်ဖြစ်သွားတာတော့ ကျုပ်လဲစိတ်မကောင်းဘူး။ thinking way ကတော့akind of literal thinking ပဲ။ ဒါပေမဲ့ negative sign ပြနေတာကခက်တရ်။ အဟတ် အဟတ်
လွန်ဒယ် မလွန်ဘူးဒေါ့ တိဝူး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေမေစုလို ့ခေါ် သို ့မဟုတ် တီတီစု လို ့ခေါ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဖေဖေလို ့ခေါ်
အဖွားဂျီးဆိုပြီးတွားမလုပ်နဲ့တိချင်ရင်ချမ်းကြည့်
ဘယ်ကောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသဲရှိတယ်လို ့ထင်လဲ
မင်းတို ့ကိုအလေးပြုချင်လို ့ပါ
အပေါ်က ဆရာ ဘာတွေရေးထားတာလဲ။ ညဏ်မမှီလို့တစ်ဆိပ်လောက်။
တစ်ဆိပ်ဆိုတာ တစ်အိပ်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ တွေးတတ်သလိုသာ တွေးပါ။ ရှင်းပြရင် ရာဇဝင်ချီလို့ သမိုင်းလှန်နေရမယ်။ တော်ကြာ ဆရာတော် အောင်ပု ရှုပ်တာ လူတွေ သိကုန်မယ်။
လှူတဲ့ငွေ မြန်မာပြည်ထဲအကုန်ရောက်ပါမယ်..။ ဆိုတာ …
ဘယ်ကိုရောက်မရ်ဆိုတာ အတိအကျသိလို.ရမလား … သဂျီး။
ကြွက်မခုတ်သောကြောင်များ ကြက်ကင် ဝက်ကင် ဘဲကင် (လူကင်လည်းပါနိုင်သပေါ့) စားဖို့လှူဒါန်းခြင်းပေါ့ကွယ်။
ရွာသားအပေါင်းရေ သဂျီးက ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ကွန်းမန့်တွေကို အနုတ်ပေးခံရတာများရင် ဖျက်ပစ်မယ်တယ်။ အဲဒါ ဝိုင်းဆွမ်းကြီးလောင်းဖို့ ဖိတ်မန္တကပြုလိုက်ပါတယ်။
အင်း အလိမ္မာ စာမှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကားက ဒီနေ့ အင်တာနတ်ခေတ်ကြီးထဲ ပျောက်ကွယ်သွားပြီလားတောင်မ သိ ပါဘူး ဦးကြောင်ကြီးရေ..။
ဟုတ်ကဲ့ သဂျီး လှူရင်ဘာအတွက် ဘယ်ကိုရောက်မလဲ ကျနော်လဲသိချင်တယ် ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ဆိတ်လောက်ရှင်းပြပေးပါလား
လှူရင်ဒါနအတွက် နတ်ပြည်ရောက်မယ်လေ ချာတူးရဲ့။ ဘာသာရေးအသိအမြင် ဒီလောက်တောင် ခေါင်းပါးရသလားကွဲ့။
အနုတ်က ပေးချင်တိုင်း ပေးလို့ရဘူး။ ကွန်နက်ရှင် လိုင်းတူက တယောက် ပေးပြီးရင် ထပ်ပေးလို့ မရဘူး။ ဒီတော့ ဆန္ဒ အမှန် ဖော်ထုတ်ပေးလို့ မရပါ။
၆၂ သန်းကိုတောင် လက်တဆုပ်က Control လုပ်တာကိုတောင် ကိုယ့်အတွေးနဲ ့ကိုယ် ဖြေသိမ့်နေကြသေးတာပဲ အမှား ၁၀ဝ အမှန် ၁ယောက် က ဘာလို ့မကျေနပ်နိုင်ရမှလဲ။ ကျေနပ်သဗျား။ ဖော်ပင်လို့ခင်ဗျားဖော်ပင်နေတယ်လို ့ပြောရင် ကျေးဇူးမတင် ပါးရိုက်တတ်တာ လူ ့သဘာဝပဲ။ ကျုပ်လွန်သဗျ။ ဟီး ဟီး……။
မာန်မာနတွေနဲ ့ဒေါသအဖြစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲလိုက်ကြတော့ကာ
မှန်ကန်တဲ့လုူပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ဖြစ်မြောက်စေဘို ့ဆိုတာ မလွယ်ကူတော့ဘူးလေ
ယနေ ့လက်ရှိအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးအကြီးကြီးဦးသန်းရွှေကို အမုန်းတရားတွေနဲ ့သာစွတ်ပြီး
ချီးဘရိန်းတို ့အာဏာရူးတို့စောက်သုံးမကျဘူး တို့ဆိုပြီး အလိုမတူတိုင်း စွတ်အော်နေကြတာဘဲရှိတယ်
သူအရည်ခြင်းရှိလို့နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုင်တွယ်ဖိနှိပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကို
ကျုပ်တို ့မဖြစ်မနေ လက်ကို ခံရလိမ့်မယ်
အဲ့လိုလက်ခံလိုက်လို ့ကျုပ်တို ့က သူ ့ရဲ ့လက်ပါးစေဖြစ်သွားမှာမှ မဟုတ်တာ
ရန်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဖက်လူကို ပြတ်ပြတ်သားသား အမှန်တိုင်းမှတ်ချက်ချပေးနိုင်ရမယ်
ဒါမှ အဖြေကိုသိမယ် လုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်မယ် ဒီလိုလာမှာ
သူ ့အာဏာတည်ရေးတွက် မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးကို သူများလက်ထဲထိုးကြွေးတာတွေ
မြန်မာ့သယံစာတစွမ်းအင်ကြောင့် ကျုပ်တို ့နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံခြားစွတ်ဖက်မှုနဲ ့
ဒီမိုကရေစီရရှိဘို ့ဆိုတာ သိပ်မမြင်တော့ဘူး ( ကိုယ့်အမြင်)
ရုတ်တရက်ကြီး သူနိုင်သွားပါတယ်လုပ်ရင် အသံတွေဆူသွားမှာသိလို့အချိန်ဆွဲလိုက်တယ်
သူနိုင်တဲ့အတွက် သူလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြလိုက်တဲ့အခါ
ကျုပ်တို ့အားလုံးက အော်တိုမက်တစ် သူ ့ကို အနိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုရောက်သွားပါလေရော
သူက ဘာဖြစ်လို ့ဒီဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခွင့်ရှိတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို လုံးဝမကြားရဘူး
ဒီရွေးကောင်ပွဲကို ကျုပ်တို ့လက္ခံလိုက်ပြီလား
ဒီမေးခွန်းတွေနဲ ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက မရှိဘဲနဲ ့
စစ်ထဲဝင်ရင်ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ် ပြောဆိုငြင်းခုန်တာတွေဘဲရှိတယ်
ဒီသတင်းရဲ့ဒီအက်ရှင်ရဲ ့ရည်ရွယ်ချက် စို ့စ်ကို မတွက်ကြည့်ကြတာလား
ရည်ရွယ်ချက်နဲ ့လမ်းကြောင်းကို တွေးမိပါတယ်။ ဦးဏှောက်တော့ကောင်းတယ်။ ဦးဏှောက်တွေကို (Master Brain) တွေကို ဝယ်ယူထားတာကြောင့်။
ကြိုဆိုပါတယ်….အကိုကြီး nigimi77 က အသုံးအနှုံး လေးတွေ အိစက် ညက်ညောပျော့ပြောင်း တမျိုးတော့
ကိုယ့်စာကိုယ် တည်းဖြတ်( Edit)လုပ်လို့ရပါတယ်။ အခုစာတွေ အတန်းကြီးဖြစ်နေတာကို စပေ့ထည့်ပေးပါ။ Edit လုပ်နေတဲ့ ..Post အောက်ဆုံးသွားကြည့်ပြီး Comment Off Check Mark ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။
Acer Aspire 15.6″ Intel i5-480M Notebook Laptop for $551 Shipped
Item comes with the following
– Intel Core i5-480M, 4GB Memory
– 640GB Disk, DVD Burner, 2-in-1 Media Card Reader
– Windows7Home, Year Warranty
Regular Price : $699.99 Shipped
1. Go to eBay and buya$30 off $150 coupon for ~$1. Make sure it’s not expired
2. Officemax Price : $579.99 Shipped
3. Apply the $30 off $150 coupon
တော့တန်း စာရင်းဝင်များနဲ့ စာရင်းဝင်ဟောင်းများ နာမည်ကို စာရင်းပြုစုပြီး ပိုစ်တခု တင်ပေးပါလား။ သင်တန်းတက်ရင် အောင်လက်မှတ်ပေးသလိုမျိုးပေါ့.. တော့တန်း စာရင်းဝင်ဘူးသူတွေ နာမည်လည်း ဖော်ပြပေးတော့ အားလုံး သိရတာပေါ့။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် ရွာကို ချစ်လဲ ဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် သိစေတာပေါ့။ ဖြစ်နိင်ရင် လုပ်ပေးနော်။ သဂျီး.. ဒိုးနပ်မုန့် အခု ဖုတ်ထားလို့.. ကျက်ရင် ကျွှေးမယ်နော်။ ဟီးဟီး. စိတ်ကူး ပြောကြည့်တာ အဆင်ပြေ မှ လုပ်ပါ။
ဒါဆို ဆူးရေ ဆိုက်စတင်တည်ထောင်ထဲက စာရင်းတွေကို ဖော်ပြပေးရမှာပေါ့နော်….
ဒီကမ္ဘာမြေပေါ် သစ္စာတရား လွှမ်းခြုံနိုင်ပါစေ says:
ဟုတ်တယ်မမ ဆူး ပြောသလိုပဲ
သစ္စာလည်းtop ten ဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေကိုသိချင်ပါတယ်။history နဲ့ကျောင်းပြီးလို့လားတော့မသိဘူး၊ဘယ်သူတွေtop ten ဝင်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့historyကိုသိချင်စိတ်ပြင်းပြနေပါတယ်။
နိုးနိုး.. top100 လောက်လုပ်ပေးပါသဂျီး။ ဒါမှမဟုတ် ကျနော့နာမည်ပါတဲ့အထိပေါ့။
သဂျီး ဆိုက်က ကျန်းမာရေး မကောင်း ဖြစ်ချင် ပြန်ပြီလား မသိဘူး။
ဆန့်ကင် ဆန့်ကင် ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ပြီး ဒီမှာ လာပြောသွားသည်။
ကြည့်ရတာ .. အန်ဒါအတက်ခ်ဖြစ်နေပုံရတယ်…။
Donate ကို နှိပ်လိုက်ရင်..ဘယ်ထဲရောက်သွားသလဲရှင့်။
just do it now.
သူကြီးရေ… ဒီနေ့အချိန်ထိ ပွိုင့် တစ်သိန်းပြည့်တာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲ ဗျို့
သဂျီးက အဝေးကနေ ပြုံးပြ မဲ့ပြ လုပ်ပြီး သတ်လိုက်တဲ့.. သိချင်လို့ မေးတာ ကြောလည်း ကြောဝူး။
thx..ko pauk. I’m going to do.
I can see that one only “CubePoints – Donate”
You can see previous 5. check it !!